Ungachinja sei mapikicha akawanda pamwe neKutarisa | Ndinobva mac
Maitiro ekugadzirisazve akawanda mafoto pamwe neKutarisa
MuMac App Store tinogona kuwana nhamba hombe yekushandisa iyo yatinogona kuita yakawanda yemabasa atinogona kuita natively pasina kushandisa aya marudzi ekushandisa. Iwo mabasa atinotangirwa neKutarisa haaperi nekuti anotibvumidza kushanda nemifananidzo, mafaera muPDF fomati
Kana tichigovana mapikicha, sekutonga kwese, isu tinonyanya kuda kudzikisa saizi kana zviyero, kuti nzvimbo yavo iderere uye tikwanise vagovana navo nekukurumidza. Rimwe basa ratingaite neKutarisa rinowanikwa mune mukana wekushandura saizi yemifananidzo, maitiro akareruka atino tsanangura pazasi.
Resize akawanda mafoto neKutarisa
Chekutanga pane zvese, isu tinosarudza ese mafoto atinoda kugadzirisa kugadzirisa kwavo. Kana tangovasarudza, isu tinongofanirwa kuenda kuFaira> Vhura uye sarudza Ratidza.
Tevere, tinoenda kukoramu yekurudyi uye tinya Command + A, kusarudza ese mafoto.
Kuti tishandure saizi yemifananidzo yese pamwechete, tinoenda kuchiratidzo chinomiririrwa nepenzura uye tinya mumenyu inodonhedza pane Chinja saizi icon, chiratidzo chinotiratidza rectangle nemuseve unoenda kukona yekuruboshwe yekona. uye zasi kurudyi.
Mune inotevera nhanho, izvo zviyero zvemifananidzo zvinoratidzwa, sekureba sekunge vese vane zvakafanana. Kana zvisiri, hapana kukosha kucharatidzwa. Isu tinongofanirwa kuisa hupamhi kana kukwirira kwatinoda kuisa kumifananidzo. Isu tinongofanirwa kuisa imwe yeminda, nekuti iko kunyorera kuchazongo tarisa kugadzira iro rimwe kukosha.
Kana maitiro acho apera, isu tinongofanirwa kuenda kuFaira yekuchengetedza, kuitira kuti shanduko dzichengetedzwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekugadzirisazve akawanda mafoto pamwe neKutarisa
Imwe nzira iri nyore inogona kuve yekudzvanya pa «100 muzana» uye nechituko sarudza zvirevo zvakafanotaurwa: 320 × 240, 640 × 480 nezvimwe ... nenzira iyi kuenzana kunoponeswa.
Kugadzira kunotanga pane Uri Kurara here akateedzana naOctavia Spencer
Chengetedza zvinoitika kumashure, neLingon yeMacOS